“Ndị Mmụta Baịbụl” A Na-akpọ Bibelkring
N’IHE dị ka afọ 1937, e nwere òtù okpukpe pụtara ọhụrụ n’akụkụ Ọdọ Mmiri Toba, dị́ n’Ebe Ugwu Sumatra. A na-akpọ òtù okpukpe a Bibelkring. Bibelkring bụ okwu Dọch nke pụtara “ìgwè ndị mmụta Baịbụl.” Ndị malitere òtù okpukpe a bụ ọtụtụ ndị nkụzi natara onye ọsụ ụzọ bịara ebe ahụ kwusaa ozi ọma n’afọ 1936 akwụkwọ anyị. O nwere ike ịbụ Nwanna Eric Ewins bụ ọsụ ụzọ ahụ. Ihe ndị nkụzi ahụ gụtara n’akwụkwọ anyị ahụ mere ka ha hapụ chọọchị Batak Protestant ma hiwe ìgwè dị iche iche na-ezukọ n’ụlọ ndị mmadụ amụ Baịbụl. Ìgwè ndị a mechara dị ọtụtụ nke na ndị òtù ha bịara ruo ọtụtụ narị. *
Onye a bụ Nwanna Nwaanyị Dame Simbolon. Ọ bụbu onye Bibelkring
Ndị mbụ nọ n’òtù Bibelkring si n’akwụkwọ ọsụ ụzọ ahụ nyere ha mụta ọtụtụ eziokwu dị́ na Baịbụl. Dame Simbolon, bụ́ onye nọbu n’òtù a ma mechaa ghọọ Onyeàmà Jehova n’afọ 1972 kwuru, sị: “Ha kwụsịrị ikele ọkọlọtọ, ịgba Krismas, na ime ememme ncheta ọmụmụ. Ụfọdụ n’ime ha gadịrị n’ụlọ n’ụlọ kwusaa ozi ọma.” Ma ebe ọ na-abụghị nzukọ Chineke na-eduzi ha, ha mechara daa n’ihi na ọ bụ amamihe mmadụ ka ha ji na-eduzi nzukọ ha. Otu nwaanyị aha ya bụ Limeria Nadapdap nọbu n’òtù a ma mechaa ghọọ Onyeàmà Jehova kwuru, sị: “Ha anaghị ekwe ka ụmụ nwaanyị ha tee ihe ntecha, kwụrụ ọla ntị, yiri efe ndị oge a, ma ọ bụkwanụ yiri akpụkpọ ụkwụ. Ha machibidokwara ndị òtù ha inwe kaadị e ji amata nwa amaala. Nke a mere ka ndị ọchịchị wesa ha iwe.”
Ndị Bibelkring mechara kewaa ma jiri nwayọọ nwayọọ daa. Mgbe ndị ọsụ mechara gaghachị n’akụkụ Ọdọ Mmiri Toba izi ozi ọma, ọtụtụ ndị nọbu n’òtù a ghọrọ Ndịàmà Jehova.
^ para. 1 Akwụkwọ ụfọdụ kwudịrị na o nwere mgbe ha ruru ọtụtụ puku.